192.168.8.1 - Peji 2 ye8 - Admin Login
The https://192.168.8.254 IP kero yakanyoreswa neIANA Internet Yakapihwa Nzvimbo Chiremera sechipo chekunze network 192.168.8.0-24. Munzvimbo yakavharirwa, IP kero haina kupihwa kune chero bhizinesi uye munhu wese anogona kushandisa IP kero isina kubvumidzwa kwerejist registry yeInternet sezvakaratidzirwa muRFC 1918, zvichisiyana zvemunharaunda IP kero.
Zvisaririra Router IP Login 192.168.8.254
Iyo yekutumira default IP iyo inochengeterwa modem kana isina waya router. Iwe unenge uine yekupinda kune iyo admin tambo yeiyo yako router nekeying 192.168.8.254 mukati mebrowser kero bar. 192.168.8.254 inonyanya kushandiswa nemazita akadai seD-Links. Haisi chete yakajairwa IPs yea routers. Kune matani eakawanda IPs semuenzaniso 192.168.0.1, 192.168.2.1, or 192.168.1.1, iyo inoshandiswa mukusvika yako VoIP Gateways, mapaneru ekudzora. Iyi standard IP inotodanwa kuti Default IP Gateway.
Havasi vese veruzhinji vanoziva yavo IP router sezvo mune zviitiko zvakawanda pane imwechete nzvimbo iyo iwe yaunofanirwa kuisa iyo IP 192.168.8.254. Apa ndipo panogadziriswa nzira yekumisikidza neanoshanda. Shure kwaizvozvo, haupinde mukutaurirana na 192.168.8.254. Zvakangodaro, nguva zhinji iwe unofanirwa kushandura iyo SSID (mazita emagetsi eWiFi), zvinodzorwa nevabereki, kana maWiFi -Passwords. Ipapo iwe unoda iyo 192.168.8.254 IP. Kutevera kupinda mukati meiyo router iwe uchaona iwo ekufamba mapaneru pano iwe unokwanisa kuendesa iyo data traffic, nzwisisa manhamba & nekugadzira iyo router yekuisa.
192.168.8.254 iwe unongoda kiyi http://192.168.8.254 mubrowser & izvi zvinokutungamira iwe kune iyo peji rewebhu kupinda mune ako admin mapaneru. Iwe unongo rongedzazve modem kugadzirwa kwefekitori kana iwe uine kukahadzika neiyo PW kana ukasangana nechero mutambo usiri iwo paPW yako.
Dzorera PW ye 192.168.8.254?
Zvese zvaunoda kuti uite kugadzirisa zvakare ma modem. Izvi zvinogona kuitwa zvirinyore nekungobaya pakiyi yekumisazve pane yekupedzisira kana pazasi memodem. Simply tinya pasi iyi miniti switch kwema 20 secs nezve, (ungangoda kushandisa toothpick), ipapo modem inogona kuzodzosera kugadziriro yefekitori.
Chaunofanira kuchengeta mundangariro ndechekuti kana uchinge waseta modem zvakare, unogona kurasikirwa nehukama hwako hwepamhepo Nekudaro zvakanaka kutora rubatsiro uye kuraira kwevashandi vane ruzivo mune izvi kunetsekana. Kana iwe usina ruzivo rwakawanda, zvinokurudzirwa kuti iwe unofanirwa kuwana rutsigiro kubva kune mumwe munhu ane iri mhando yeruzivo.
192.168.8.254 IP Kero ndeyako IP kero. Remote IP kero inoshandiswa mukati yenzvimbo yenzvimbo netiweki (LAN) & ivo havaonekwe pa internet Kero iri kure yeIP yakatsanangurwa muna 1918 (IPv4) RFC pamwe ne 4193 (IPv6) RFC.
Iyo yakakosha IP 192.168.8.254 ndeyekutora iyo admin pane iyo router. Dzimwe dzese IP dzakadai se 192.168.0.99,192.168.8.1, 192.168.4.1, nezvimwe zvakagamuchirwa panguva imwe chete kune router IPs zvakasikwa. Kunyangwe iyo inotsanangurwa mumabhuku se "Default IP Gateway."
Mumwe anokwanisa kurarama nesarudzo dzekuchengetedza zvine hungwaru, DNS, proxy, LAN, WAN, Network Management, WLAN marongero, WPS block ADSL, DSL, MAC, IP QoS, zvimwe zvakawanda.
Chinyorwa cheZvinogoneka Username & password
D-Link (hakuna) arun
D-Link (hakuna) voga
D-Link (hakuna) ruzhinji rwevanhu
D-Link arun (hakuna)
D-Link arun arun
← pashure peji1 peji2 peji3 ... peji8 Next →